प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन आगामी फागुनका लागि तोकिएको छ । तर बढ्दो आन्तरिक किचलोका कारण निर्धारित मितिमै महाधिवेशन हुन गाह्रो छ । संस्थापन र संस्थापनईतरबीच द्वन्द्व बढिरहेका बेला महाधिवेशनलाई केन्द्रमा राखेर नेपाली पब्लिकका लागि कृष्ण गिरीले दुवै पक्षका नेतासँग कुराकानी गरेका छन् । यस क्रममा नेकाका नेता अर्जुननरसिंह केसीसँगको संक्षिप्त अन्तर्वार्ता-
० तोकिएको मितिमा महाधिवेशन हुने सम्भावना छ ?
महाधिवेशनको मिति घोषणा भएको छ । महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा हुनुपर्छ भन्ने हो । महाधिवेशनको मिति संस्थापन पक्षबाट प्रस्ताव भएको हो । फागुनमा महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव आउँदा मैले अलि व्यावहारिक बनौँ, समयको ख्याल गरौँ भनेको हुँ । जबकि असोजबाट चाडबाड सुरु हुन्छन् । अहिले कोरोनाको महामारी छ । हिउँद लागेपछि हिमाली जिल्लामा हिउँ पर्छ, महाधिवेशन गर्न अप्ठेरो हुन्छ भन्यौँ ।
तर सभापतिज्यूले फागुनमै महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्नुभयो । मैले व्यावहारिक कार्यक्रम ल्याउन भनेको हुँ । यसकारण अब त तोकिएकै समयमा महाधिवेशन हुनुपर्छ । कार्यसमितिले सर्वसम्मत रूपमा पास गरेको निर्णय हो । अहिले कस्तो निर्णय भयो, त्यो हेर्न बाँकी नै छ । तर, तोकिएको समयमा महाधिवेशन हुनैपर्छ ।
यो नेतृत्वसँग दुरदृष्टि छैन । आउने संकट पनि आक्न नसक्नु नेतृत्वको समस्या हो । कोरोना महामारी सुरु भएपछि पनि फागुनमै महाधिवेशन गरौँ भनेर संस्थापन पक्षले नै भनेको हो । अब हामी महाधिवेशन सार्ने पक्षमा छैनौँ । हुन सक्छ भनेर त फागुनको प्रस्ताव ल्याउनुभएको होला नि ।
० पौडेल पक्षले विभाग गठनलगायतका काम गर्न सहयोग नगरेको आरोप संस्थापन पक्षले लगाइरहेको छ नि ?
जुन आरोप लगाएको छ, त्यो असत्य हो । आज जसरी स्वेच्छाचारी ढंगले विभाग गठन गर्दै हुनुहुन्छ, यो विधानले दिएको अधिकार
थियो ? भर्खर महासमितिले अन्तिम स्वरूप दिएको २८ विभाग छन् । तर उहाँहरूले एकलौटी रूपमा ४७ बनाउनुभयो । विभागको संख्या बढाउँदा हाम्रो असहमति थियो । उहाँको पक्षका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई अहिले यस्तो नगरौँ, २८ वटा विभागमा मनोनयन गरौँ भनेको हुँ ।
यदि थप्नै परे सहमतिमा पछि थपाैँला भनेको हुँ । महासमितिको मसी सुक्न नपाउँदै मनलाग्दी तरिकाले विभाग थप्नुभयो । तर उहाँहरूले हामीले भनेको मान्नुभएन । उहाँले महाधिवेशनको ६ महिनापछि विभाग गठन गर्नुपर्थ्याे । उहाँले विभाग गठन गर्नुभएको भए स्थानीय निर्वाचन, प्रदेश र संंघीय निर्वाचनमा भूमिका हुन्थ्यो । आज यस्तो अवस्थामा विभागलगायतका विभिन्न ठाउँमा नियुक्ति गर्नुभयो ।
विधानले दिएको एक वर्षे कार्यकाल थप्नुभयो । त्यो पनि ठीकै छ भन्याैँ । सहमतिमा संयोजनमा गएर सहमति गर्‍यौँ । थपिएको कार्यकालमा महाधिवेशनको मिति दुई पटक थपिएपछि अब त तोकिएको समयमा महाधिवेशन हुनुपर्छ ।
महाधिवेशन भनेकोे नीतिगत निर्णय मात्र गर्ने ठाउँ होइन । नेतृत्व चुन्ने ठाउँ पनि हो । महाधिवेशनको मिति तोकिएपछि अब सार्ने काम गर्नुहुन्न । यस्तो ठाउँमा आचारसंहिता हुन्छ । तर, यसको खुला अपहेलना भएको छ । नेपाली कांग्रेसको इतिहास हेर्ने हो भने सुशील कोइरालाले साढे तीन वर्षमा गठन गरेका विभाग खारेज गर्न अहिलेका सभापति शेरबहादुर देउवाले माग गर्नुभएको हो र खारेज भए । उहाँले निर्णय खारेज नभए सामूहिक राजीनामा दिन्छु, सत्याग्रह गर्छु भन्नुभएको थियो । त्यो समयमा सबै निर्णय फिर्ता भएका थिए ।
विधानभित्रका कैयौँ कुरा बहुमतले गर्न नमिल्ने छन् । उहाँले भने बहुमतले निर्णय गर्दै जानुभयो । बीचबीचमा म विभाग गठन गर्दै छु, नाम दिने भए दिनुहोस् भन्दै हिँड्नुभयो । कैयौँ नियम संशोधन गर्नुभयो । यो सब स्वेच्छाचारी रूपमा पार्टी सञ्चालन गर्नुभयो । अहिले जति साथीहरू नियुक्त भएका छन्, ती सबै उहाँलाई नेतृत्व मान्न तयार छैनन् । यो भ्रमबाट पनि मुक्त भए हुन्छ । अहिले भएका सबै निर्णय एकलौटी भएका छन् । यो उहाँको पार्टी कब्जा गर्ने रणनीति मात्र हो । राष्ट्रिय परिस्थिति गम्भीर छ । यस्तो अवस्थामा मिलेर जानुपर्ने हो ।
कम्युनिस्टको शासन छ । भ्रष्टाचारमा सरकार लिप्त छ । यस्तो महामारीमा पनि सरकार जनताको पक्षमा छैन । दैनिक ज्यालादारी गर्ने ३५ लाख श्रमिकको बेहाल छ । सरकार लकडाउन, अर्ध लकडाउन गरेर बसेको छ । सरकार चाहन्छ, जनता घरमा बसोस् । क्वारेन्टिन भेडीगोठ जस्ता छन् । अस्पताल नपाएर बिमारी मरिरहेका छन् । आत्महत्या बढेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारका विरुद्ध सशक्त प्रतिरोध गर्नुपर्नेमा आफैँ आफैँबीच लडाइँ छ । कसरी हुन्छ ? कोरोनाको समयमा मिलेर जानुपर्ने अवस्थामा तिक्तता चाहँदैनौं । हामी पार्टीमा समस्त एकता चाहन्छौँ । यो भनेको संस्थापनले मनपरी गरेर पनि हुन्छ भन्ने होइन । सबै सहमतिमा चल्नुपर्छ । मिलेर जानुपर्छ ।
हामी छलफलमा छौं । लिखित रूपमा पार्टीमा असहमति दिन्छौँ । पार्टीको क्रियाशील सदस्यता मनपरी तरिकाले वितरण भयो, यो रोक्नुपर्छ । सबै ठाउँमा जिल्ला सभापतिलाई नै क्रियाशील सदस्यता रोकिएको छ । कहीँ जिल्ला सभापतिलाई काम दिएको छ । कहीँ सभापतिलाई नै थाहा छैन । यस्तो मनपरी हामी पनि टुलुटुलु हेरेर बस्दैनाैँ ।
समायोजनमा पनि अलमल गरेको छ । कार्यसमितिको निर्देशिका छ । त्यहीअनुसार पार्टीको क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्नुपर्छ । तर, हामी अहिले भएका बेथितिका बारेमा ठोस निर्णय लिँदै छौँ । लोकतन्त्र भनेको पारदर्शिता हो । विधिको शासन हो । यो भएन भने लोकतन्त्र हुँदैन ।
नेपाली कांग्रेसमा सबैभन्दा ठूलो समस्या आन्तरिक लोकतन्त्रको छ । लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा संघर्ष गर्‍यौँ । नेपालका तीन लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व कांग्रेसले गर्‍यो । तर पार्टीभित्र भने सधैँ लोकतन्त्रको खोजी गर्नुपर्‍यो । नेपाली कांग्रेस विधिप्रधान होइन, नेताप्रधान भयो । विधि विधानमा होइन, नेताको इच्छामा चल्यो । विचारप्रधान बनाउन सकिएन, व्यक्तिप्रधान नै रह्यो । हामीले आन्तरिक समस्याको समाधान खोजेनाैँ । प्रवृत्ति सुधार्न सकेनाैँ । पार्टी विधि र विधानमा चलेन । म अहिले पनि वैचारिक पुनः जागरणको आवश्यकता छ भन्दै यहीँ अभियानमा छु ।
० कांग्रेसले प्रतिपक्षको भूमिका निभाउन नसकेको आरोप छ नि ?
यो आरोपमा आंशिक सत्यता छ । अहिले त कोरोना छ । यसभन्दा पहिला पनि कांग्रेसले प्रतिपक्षको भूमिका निभाउन सकेन । वाइडबडी, नेपाल ट्रस्टको जग्गा, प्रिन्टिङ प्रेसको मात्र कुरा होइन ।
पछिल्लो समयमा ओम्नी काण्डसम्म सशक्त भूमिका निभाउन सकेन । लाउडा प्रकरणमा ५९ दिनसम्म संसद् अवरुद्ध गर्ने पार्टी एमाले हो । यो संसदीय इतिहासमा ताजै छ । अहिले जति पनि सरकारले गरेका भ्रष्टाचारका मुद्दा छन्, त्यसलाई लिएर तीन दिन पनि संसद् अवरुद्ध गर्न सकेनाैँ । मानवअधिकारको हनन, गुठी विधेयकलगायतका कुरा पनि मुद्दा बनाउन सकेनाैँ । सरकारसँग आजित नेपाली जनताको आवाज उठाउन सकेनाैँ ।
यदि कांग्रेस जोडिएको छ भने प्रमाणित गरेर देखाउँदा हुन्छ । अझ एक आयोग बनाएर छानबिन गर्दा हुन्छ । त्यो आयोग शक्तिशाली होस् । त्यसमा जुन व्यक्ति परे पनि परोस् । यो खोतल्न नेकपा चाहँदैन । कैयौँ मानिस मलाई पनि भन्छन्, लहरो तान्दा पहरो आउला । म भन्छु हामीले भ्रष्टाचार गरेका छौं भने जनताका अगाडि नंग्याइदिए हुन्छ । भ्रष्टाचार छानबिन गर्न कांग्रेसले सरकारलाई रोकेको हो ? यो सबै केही पनि नगर्ने बहाना हो । सके छानबिन गरे हुन्छ ।
अर्को पक्षका नेता एनपी साउदको अन्तरर्वार्ता पनि पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: बिहीबार, भदौ २५, २०७७ २३:३६